ဘူဖှနျရေးတဲ့ ဘူဖှနျ့ထံ ပေးစာ……..(အပိုငျး 1) - SPORTS MYANMAR
ဘူဖှနျရေးတဲ့ ဘူဖှနျ့ထံ ပေးစာ……..(အပိုငျး 1)
ခဈြလှစှာသော အသကျ 17 နှဈသာ ရှိသေးတဲ့ ဘူဖှနျလေးရေ……
ဒီစာကို အသကျ 41 နှဈ ရှိပွီ ဖွဈတဲ့ ၊ ဘ၀ အတှအေ့ကွုံတှေ အမြားကွီး အမြားကွီးရှိနတေဲ့ 41 နှဈ အရှယျ ဘူဖှနျကွီးက ရေးသားလိုကျပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ သတငျးကောငျးတှလေဲ ပါမယျ ၊ သတငျးဆိုးတှေ လဲ ပါမယျ ။ သခြောတာ တဈခုက ဒီစာဟာ မငျးရဲ့ ဝိညဏျ အကွောငျးကို အမှနျတရားတှနေဲ့ ပွောပွသှားမှာပါ။
မငျးမှာ ဝိညဏျ တဈခုရှိနတေယျ ဆိုတာတော့ ယုံထားတယျ မဟုတျလား….
ဒါဆိုရငျ သတငျးဆိုး တဈခုနဲ့ စလိုကျကွရအောငျအောငျကှာ ။ မငျးဟာ အခုမှ အသကျ က 17 နှဈပဲ ရှိသေးတယျ ၊ မကွာခငျမှာ မငျးအိပျမကျထဲက ဘောလုံးသမား တဈယောကျ ဖွဈလာတော့မယျ ၊ မငျးကိုယျမငျး လဲ အကုနျလုံး သိထားနပွေီလို့ ယူဆနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့ အမှနျတရားကတော့ မငျးဟာ ဘာမှကို မသိနားမလညျသေးပါဘူးကှာ။
လာမယျ့ ရကျပိုငျးအတှငျးမှာ မငျးဟာ ပါးမား အသငျးရဲ့ စီးရီးအေး ပှဲထှကျခှငျ့ကို ပထမဆုံး အကွိမျ ရရှိတော့မယျ ၊ ဒါကို ကွောကျရ လနျ့ရကောငျးမှနျးလဲ မသိဘူး။ အမှနျဆိုရငျ အဲဒီ အတှကျ ပွငျဆငျတဲ့ အနနေဲ့ နှားနို့ပူပူလေး သောကျရငျး အိပျရေး၀၀ ဖွဈအောငျ အိပျပွီး အားမှေးထားသငျ့တာကှ။ အခုတော့ မငျးက သူငယျခငျြး တဈယောကျနဲ့ နိုကျကလပျသှားဖို့ ပွငျနတေယျပေါ့။
ပွီးရငျ ဘီယာလေးလဲ သောကျလိုကျဦးမယျပေါ့…ဟုတျလား။
ပွီးရငျ စကားလုံးတှကေ ရှုပျလာဦးမယျ ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ စိတျဓါတျကွံ့ခိုငျသူကွီးလို့ မှတျယူထားတဲ့ လူငယျတဈယောကျက ရငျဆိုငျလာရမယျ့ ဖိအားတှကေို ဒီလို ပုံစံမြိုးနဲ့ ဖွရှေငျးကွညျ့တယျပေါ့။ မကွာခငျ ကလပျ အပွငျဘကျနားကို ရောကျလာတော့မယျ ၊ ရဲတှေ နဲ့လဲ အငွငျးအခုနျလဲ ဖွဈခငျြ ဖွဈဦးမယျ။
အိမျပဲ တနျးပွနျပါကှာ……..ပွီးရငျ အိပျယာထဲမှာ အိပျပဈလိုကျစမျးပါ။
ကြေးဇူးပွုပွီးတော့ ငါ ကွိုပွီး မတ်ေတာရပျခံထားပါရစေ……ရဲကားကိုတော့ သှားပွီး သေးနဲ့ မပနျးလိုကျပါနဲ့။ သူတို့က မငျးကို ခှငျ့လှတျမှာ မဟုတျသလို ၊ ကလပျကလဲ မငျးကို ညှာတာမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီလို အပွုအမူမြိုးကွောငျ့ ၊ မငျးကွိုးစားခဲ့သမြှတှေ အားလုံး သဲထဲရသှေနျ သလို ဖွဈသှားနိုငျတယျနျော။
ဒီလို ပရမျးပတာတှကေ တကယျတော့ ဘာအကွောငျးပွခကျြမှလဲ တိတိကကြ မရှိပဲနဲ့ ဖွဈနတော။ မငျး ရငျထဲမှာ ခံစားရတာတှကေ မှားယှငျးတဲ့ဘကျကို ဦးတညျနတောကှ။ မငျးကိုမငျးတော့ အသငျးက ကစားဖျောတှေ အကွားမှာ စိတျဓါတျ ကွံ့ခိုငျတယျ ၊ လှတျလပျမှု အပွညျ့နဲ့ နတေယျလို့ ပွောနပေမေယျ့ ၊ တကယျတော့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ညာနတော မငျးသိပါတယျ။
မကွာခငျလဲ ထူးဆနျးတဲ့ အရာကွီ3းခုကိုလဲ မငျးလကျဆောငျရလာဦးမှာကှ။ အဲဒီ အရာတှကေ အရမျးကို အန်တရာယျမြားသလို ၊ အဆိပျတှလေို့တောငျ ပွောလို့ရတယျနျော။
ဘာတှလေဲ ဆိုတော့ ငှရေယျ ၊ ကြျောကွားမှု ရယျ နဲ့ မငျးရဲ့ အိပျမကျ ပရို ဘောလုံးသမား တဈယောကျ ဖွဈလာခှငျ့ ပါပဲ။
ဒါတှကေ ဘာလို့ အန်တရာယျ မြားတာလဲလို့ မငျးလဲ အခုခြိနျမှာ လေးလေးနကျနကျ စဉျးစားနလေောကျတယျ ထငျပါတယျ။ စဉျးစားမယျဆိုလဲ စဉျးစားခငျြစရာလေ……ဒါတှကေ ဘ၀ အတှကျ မကောငျးဘူးလား၊ ဘာဖွဈလို့ ဝိရောဒိ ဖွဈနရေတာလဲ။
အခွား တဈဖကျကနေ ကွညျ့ရငျ ဂိုးသမား တဈယောကျအတှကျ မှနျတကယျလိုအပျတာက ယုံကွညျမှုပါ။ သူဟာ ကွောကျရှံ့မှု လုံးဝကို ကငျးမဲ့နရေပါမယျ။ မနျနဂြော တဈယောကျကို နညျးစနဈ ပိုငျးဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြတဲ့ ဂိုးသမား နဲ့ ကွောကျရှံ့မှု ကငျးတဲ့ ဂိုးသမား ဘယျသူ့ကို ရှေးခယျြမလဲ လို့ မေးလိုကျရငျ ၊ အားလုံးက အကွောကျတရား လုံးဝ မရှိတဲ့ ဂိုးသမားကိုပဲ အမွဲတမျး ပှဲထှကျခှငျ့ ပေးပါလိမျ့မယျ။
ဒါပမေယျ့ နောကျတဈဖကျ ကနေ ပွနျကွညျ့လိုကျရငျတော့ ကွောကျရှံ့မှု ကငျးတယျ ဆိုတဲ့ လူတိုငျးကလဲ သူတို့မှာ ခံစားတတျတဲ့ စိတျလေး ရှိနတေယျ ဆိုတာ မနေ့ကွေတယျလေ။ မငျးသာ တဈခြိနျလုံး ဘောလုံးအပျေါပဲ စဉျးစားရငျး အသကျရှငျနမေယျ ဆိုရငျတော့ ၊ သခြောပါတယျ မကွာခငျမှာ စိတျဓါတျကမြှုတှေ ခဏလေးနဲ့ ဝငျလာတော့မှာပါ။ ဘယျလောကျအထိ ဆိုးသလဲ ဆိုရငျ အိပျယာထဲကနတေောငျ ထခငျြ မှာ မဟုတျပါဘူး။
မငျးဖာသာမငျး ၊ ဘယျလောကျအထိ ကွိုးစားပွီး ပွုံးရယျနပေါစေ ၊ ဒါတှကေ ကွုံကို ကွုံရမှာပါ။ အထူးသဖွငျ့ ကစားသမားဘ၀ အမွငျ့ဆုံး ရောကျလာလလေေ ၊ ပိုပွီးတော့ ရငျဆိုငျရလလေေ ပါပဲ။ မငျးအသကျ 26 နှဈမှာ ဂြူဗငျတပျ အသငျးရဲ့ ဂိုးသမား ဖွဈလာမယျ ၊ အီတလီ လကျရှေးစငျ အသငျးရဲ့ ဂိုးသမား ဖွဈလာမယျ ၊ ငှကွေေး ခမျြးသာလာမယျ ၊ လူတှရေဲ့ လေးစားမှုတှေ ရရှိလာမယျ ၊ ကုနျကုနျပွောရရငျ လူတှကေ မငျးကို Superman လို့တောငျ ချေါလာကွမှာပါ။
ဒါပမေယျ့ မငျးဟာ Superman လုံးဝ မဟုတျပါဘူး ။ မငျးဟာ လူသားတှထေဲက လူသား တဈယောကျသာ ဖွဈပါတယျ။ ဘောလုံး နဲ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျး လုပျပွီ ဆိုတာ နဲ့ မငျးဟာ လူစငျစဈကနေ စကျရုပျတဈခုလို ရုပျခညျြးပွောငျးသှားရတော့မှာပါ။ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျး သှားတယျ ၊ အိမျပွနျတယျ ၊ တီဗှီကွညျ့တယျ ၊ အိပျတယျ ၊ နောကျတဈနေ့ ပှဲ ကစားတယျ ၊ နိုငျလိုကျ / ရှုံးလိုကျ နဲ့ သံသရာ လညျနတောပါပဲ။ တှေးကွညျ့ရငျ မကုနျဆုံးနိုငျတဲ့ သံသရာကွီးကို လညျပတျနရေသလိုပါကှာ။
မနကျခငျးရောကျတော့ အိပျယာထပွီး ၊ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးသှားတဲ့ အခြိနျ ဒူးတှေ တုနျခငျြ တုနျနဦေးမှာ ။ တဈခါတလေ ကားမောငျးဖို့တောငျ အငျအားမရှိတာမြိုးတှေ ကွုံရဦးမှာပါကှာ။ မငျထငျတာ အားနညျးလို့လား ၊ ဗိုငျးရပျ ကူးခံရလို့လား ဆိုပွီး စဉျးစားကောငျး စဉျးစားနမှောဖွဈပမေယျ့ ၊ ပိုဆိုးလာရငျတော့ အိပျယာထဲမှာပဲ ခှခှေလေေး နခေငျြမှာပဲလေ။ ဒါပမေယျ့ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာတော့ ဂိုးပေါငျးကာကှယျမှုတိုငျးက အရမျးကို ပွငျးထနျလှနျးပါတယျ။
7 လ လောကျအထိတော့ မငျးကိုယျမငျး ဘောလုံးလောကမှာ အတညျတကြ ဖွဈဖို့ ရုနျးကနျရဥိးမှာပါ။ အဲဒီ အခိုကျအတနျ့ ရောကျလာပွီ ဆိုရငျ ခဏလေးတော့ အနားယူလိုကျကှာ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မငျးဟာ အခုမှ 17 နှဈပဲ ရှိသေးတယျလေ။ အဲဒီတော့ ငါ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို အခု ဆကျခံရရှိနတောပေါ့။
မငျးစိတျထဲမှာ ကနြျောတော့ ဒါမြိုးတှေ ကွုံမှာ မဟုတျဘူး ၊ ကနြျောက ခေါငျးဆောငျ တဈယောကျဖွဈလာဖို့ မှေးဖှားလာတဲ့သူ ၊ အမွဲတမျး ပြျောပြျောရှငျရှငျ နတေတျတဲ့သူ ဆိုပွီး မာနျတကျခငျြ တကျနပေါလိမျ့မယျ။ ငါလဲ ဂြူဗီ ဂိုးသမား ဖွဈလာပွီး ၊ ဝငျငှေ သနျးခြီ ရလာတော့ ပြျောတာပေါ့ ၊ စိတျဓါတျကမြှု ဆိုတာ ဘာမှနျးတောငျ မသိဘူးကှာလို့တောငျ ရရှေတျခဲ့ဖူးတယျဟ။
ကဲ …….ဒါဆိုရငျ မငျးကို ငါ မေးခှနျးတဈခု ပွနျမေးမယျ “ မငျးဟာ ဘယျလို ရညျရှယျခကျြမြိုး နဲ့ ဘောလုံးသမား ဖွဈဖို့ ကွိုးစားလာခဲ့တာလဲ။ ပွနျစဉျးစားကွညျ့စမျးပါကှာ”
မငျးဘောလုံးသမား ဖွဈလာတာ သောမတျ အနျကိုနို ကွောငျ့လို့ ဆိုပွီး လှယျလှယျလေးနဲ့ အဖွေ မပေးပါနဲ့ ၊ ဒီထကျ ပိုပွီး လေးလေးနကျနကျ ပွနျတှေးကွညျ့ရငျး အဖွပေေးပါ။ မငျးအနနေဲ့ အသကျ 12 နှဈ အရှယျမှာ ဆုံးဖွတျခကျြ ခိုငျခိုငျမာမာ ခမြှတျခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာ တဈခုကို အသေးစိတျလေးတှေ က အစ မှတျမိနမေယျ ဆိုတာ ငါသိပါတယျ။
ဘူဖွန်ရေးတဲ့ ဘူဖွန့်ထံ ပေးစာ……..(အပိုင်း 1)
ချစ်လှစွာသော အသက် 17 နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ ဘူဖွန်လေးရေ……
ဒီစာကို အသက် 41 နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ၊ ဘ၀ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး အများကြီးရှိနေတဲ့ 41 နှစ် အရွယ် ဘူဖွန်ကြီးက ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ သတင်းကောင်းတွေလဲ ပါမယ် ၊ သတင်းဆိုးတွေ လဲ ပါမယ် ။ သေချာတာ တစ်ခုက ဒီစာဟာ မင်းရဲ့ ဝိညဏ် အကြောင်းကို အမှန်တရားတွေနဲ့ ပြောပြသွားမှာပါ။
မင်းမှာ ဝိညဏ် တစ်ခုရှိနေတယ် ဆိုတာတော့ ယုံထားတယ် မဟုတ်လား….
ဒါဆိုရင် သတင်းဆိုး တစ်ခုနဲ့ စလိုက်ကြရအောင်အောင်ကွာ ။ မင်းဟာ အခုမှ အသက် က 17 နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ် ၊ မကြာခင်မှာ မင်းအိပ်မက်ထဲက ဘောလုံးသမား တစ်ယောက် ဖြစ်လာတော့မယ် ၊ မင်းကိုယ်မင်း လဲ အကုန်လုံး သိထားနေပြီလို့ ယူဆနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ့် အမှန်တရားကတော့ မင်းဟာ ဘာမှကို မသိနားမလည်သေးပါဘူးကွာ။
လာမယ့် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မင်းဟာ ပါးမား အသင်းရဲ့ စီးရီးအေး ပွဲထွက်ခွင့်ကို ပထမဆုံး အကြိမ် ရရှိတော့မယ် ၊ ဒါကို ကြောက်ရ လန့်ရကောင်းမှန်းလဲ မသိဘူး။ အမှန်ဆိုရင် အဲဒီ အတွက် ပြင်ဆင်တဲ့ အနေနဲ့ နွားနို့ပူပူလေး သောက်ရင်း အိပ်ရေး၀၀ ဖြစ်အောင် အိပ်ပြီး အားမွေးထားသင့်တာကွ။ အခုတော့ မင်းက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ နိုက်ကလပ်သွားဖို့ ပြင်နေတယ်ပေါ့။
ပြီးရင် ဘီယာလေးလဲ သောက်လိုက်ဦးမယ်ပေါ့…ဟုတ်လား။
ပြီးရင် စကားလုံးတွေက ရှုပ်လာဦးမယ် ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်သူကြီးလို့ မှတ်ယူထားတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်က ရင်ဆိုင်လာရမယ့် ဖိအားတွေကို ဒီလို ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖြေရှင်းကြည့်တယ်ပေါ့။ မကြာခင် ကလပ် အပြင်ဘက်နားကို ရောက်လာတော့မယ် ၊ ရဲတွေ နဲ့လဲ အငြင်းအခုန်လဲ ဖြစ်ချင် ဖြစ်ဦးမယ်။
အိမ်ပဲ တန်းပြန်ပါကွာ……..ပြီးရင် အိပ်ယာထဲမှာ အိပ်ပစ်လိုက်စမ်းပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ငါ ကြိုပြီး မေတ္တာရပ်ခံထားပါရစေ……ရဲကားကိုတော့ သွားပြီး သေးနဲ့ မပန်းလိုက်ပါနဲ့။ သူတို့က မင်းကို ခွင့်လွှတ်မှာ မဟုတ်သလို ၊ ကလပ်ကလဲ မင်းကို ညှာတာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို အပြုအမူမျိုးကြောင့် ၊ မင်းကြိုးစားခဲ့သမျှတွေ အားလုံး သဲထဲရေသွန် သလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်။
ဒီလို ပရမ်းပတာတွေက တကယ်တော့ ဘာအကြောင်းပြချက်မှလဲ တိတိကျကျ မရှိပဲနဲ့ ဖြစ်နေတာ။ မင်း ရင်ထဲမှာ ခံစားရတာတွေက မှားယွင်းတဲ့ဘက်ကို ဦးတည်နေတာကွ။ မင်းကိုမင်းတော့ အသင်းက ကစားဖော်တွေ အကြားမှာ စိတ်ဓါတ် ကြံ့ခိုင်တယ် ၊ လွတ်လပ်မှု အပြည့်နဲ့ နေတယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် ၊ တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညာနေတာ မင်းသိပါတယ်။
မကြာခင်လဲ ထူးဆန်းတဲ့ အရာကြီ3းခုကိုလဲ မင်းလက်ဆောင်ရလာဦးမှာကွ။ အဲဒီ အရာတွေက အရမ်းကို အန္တရာယ်များသလို ၊ အဆိပ်တွေလို့တောင် ပြောလို့ရတယ်နော်။
ဘာတွေလဲ ဆိုတော့ ငွေရယ် ၊ ကျော်ကြားမှု ရယ် နဲ့ မင်းရဲ့ အိပ်မက် ပရို ဘောလုံးသမား တစ်ယောက် ဖြစ်လာခွင့် ပါပဲ။
ဒါတွေက ဘာလို့ အန္တရာယ် များတာလဲလို့ မင်းလဲ အခုချိန်မှာ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားနေလောက်တယ် ထင်ပါတယ်။ စဉ်းစားမယ်ဆိုလဲ စဉ်းစားချင်စရာလေ……ဒါတွေက ဘ၀ အတွက် မကောင်းဘူးလား၊ ဘာဖြစ်လို့ ဝိရောဒိ ဖြစ်နေရတာလဲ။
အခြား တစ်ဖက်ကနေ ကြည့်ရင် ဂိုးသမား တစ်ယောက်အတွက် မှန်တကယ်လိုအပ်တာက ယုံကြည်မှုပါ။ သူဟာ ကြောက်ရွံ့မှု လုံးဝကို ကင်းမဲ့နေရပါမယ်။ မန်နေဂျာ တစ်ယောက်ကို နည်းစနစ် ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဂိုးသမား နဲ့ ကြောက်ရွံ့မှု ကင်းတဲ့ ဂိုးသမား ဘယ်သူ့ကို ရွေးချယ်မလဲ လို့ မေးလိုက်ရင် ၊ အားလုံးက အကြောက်တရား လုံးဝ မရှိတဲ့ ဂိုးသမားကိုပဲ အမြဲတမ်း ပွဲထွက်ခွင့် ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ဖက် ကနေ ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ကြောက်ရွံ့မှု ကင်းတယ် ဆိုတဲ့ လူတိုင်းကလဲ သူတို့မှာ ခံစားတတ်တဲ့ စိတ်လေး ရှိနေတယ် ဆိုတာ မေ့နေကြတယ်လေ။ မင်းသာ တစ်ချိန်လုံး ဘောလုံးအပေါ်ပဲ စဉ်းစားရင်း အသက်ရှင်နေမယ် ဆိုရင်တော့ ၊ သေချာပါတယ် မကြာခင်မှာ စိတ်ဓါတ်ကျမှုတွေ ခဏလေးနဲ့ ဝင်လာတော့မှာပါ။ ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးသလဲ ဆိုရင် အိပ်ယာထဲကနေတောင် ထချင် မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မင်းဖာသာမင်း ၊ ဘယ်လောက်အထိ ကြိုးစားပြီး ပြုံးရယ်နေပါစေ ၊ ဒါတွေက ကြုံကို ကြုံရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ကစားသမားဘ၀ အမြင့်ဆုံး ရောက်လာလေလေ ၊ ပိုပြီးတော့ ရင်ဆိုင်ရလေလေ ပါပဲ။ မင်းအသက် 26 နှစ်မှာ ဂျူဗင်တပ် အသင်းရဲ့ ဂိုးသမား ဖြစ်လာမယ် ၊ အီတလီ လက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ ဂိုးသမား ဖြစ်လာမယ် ၊ ငွေကြေး ချမ်းသာလာမယ် ၊ လူတွေရဲ့ လေးစားမှုတွေ ရရှိလာမယ် ၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် လူတွေက မင်းကို Superman လို့တောင် ခေါ်လာကြမှာပါ။
ဒါပေမယ့် မင်းဟာ Superman လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး ။ မင်းဟာ လူသားတွေထဲက လူသား တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံး နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ပြီ ဆိုတာ နဲ့ မင်းဟာ လူစင်စစ်ကနေ စက်ရုပ်တစ်ခုလို ရုပ်ချည်းပြောင်းသွားရတော့မှာပါ။ လေ့ကျင့်ရေးကွင်း သွားတယ် ၊ အိမ်ပြန်တယ် ၊ တီဗွီကြည့်တယ် ၊ အိပ်တယ် ၊ နောက်တစ်နေ့ ပွဲ ကစားတယ် ၊ နိုင်လိုက် / ရှုံးလိုက် နဲ့ သံသရာ လည်နေတာပါပဲ။ တွေးကြည့်ရင် မကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့ သံသရာကြီးကို လည်ပတ်နေရသလိုပါကွာ။
မနက်ခင်းရောက်တော့ အိပ်ယာထပြီး ၊ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းသွားတဲ့ အချိန် ဒူးတွေ တုန်ချင် တုန်နေဦးမှာ ။ တစ်ခါတလေ ကားမောင်းဖို့တောင် အင်အားမရှိတာမျိုးတွေ ကြုံရဦးမှာပါကွာ။ မင်ထင်တာ အားနည်းလို့လား ၊ ဗိုင်းရပ် ကူးခံရလို့လား ဆိုပြီး စဉ်းစားကောင်း စဉ်းစားနေမှာဖြစ်ပေမယ့် ၊ ပိုဆိုးလာရင်တော့ အိပ်ယာထဲမှာပဲ ခွေခွေလေး နေချင်မှာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာတော့ ဂိုးပေါင်းကာကွယ်မှုတိုင်းက အရမ်းကို ပြင်းထန်လွန်းပါတယ်။
7 လ လောက်အထိတော့ မင်းကိုယ်မင်း ဘောလုံးလောကမှာ အတည်တကျ ဖြစ်ဖို့ ရုန်းကန်ရဥိးမှာပါ။ အဲဒီ အခိုက်အတန့် ရောက်လာပြီ ဆိုရင် ခဏလေးတော့ အနားယူလိုက်ကွာ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မင်းဟာ အခုမှ 17 နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်လေ။ အဲဒီတော့ ငါ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အခု ဆက်ခံရရှိနေတာပေါ့။
မင်းစိတ်ထဲမှာ ကျနော်တော့ ဒါမျိုးတွေ ကြုံမှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ကျနော်က ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ မွေးဖွားလာတဲ့သူ ၊ အမြဲတမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်တဲ့သူ ဆိုပြီး မာန်တက်ချင် တက်နေပါလိမ့်မယ်။ ငါလဲ ဂျူဗီ ဂိုးသမား ဖြစ်လာပြီး ၊ ဝင်ငွေ သန်းချီ ရလာတော့ ပျော်တာပေါ့ ၊ စိတ်ဓါတ်ကျမှု ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိဘူးကွာလို့တောင် ရေရွတ်ခဲ့ဖူးတယ်ဟ။
ကဲ …….ဒါဆိုရင် မင်းကို ငါ မေးခွန်းတစ်ခု ပြန်မေးမယ် “ မင်းဟာ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်မျိုး နဲ့ ဘောလုံးသမား ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့တာလဲ။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါကွာ”
မင်းဘောလုံးသမား ဖြစ်လာတာ သောမတ် အန်ကိုနို ကြောင့်လို့ ဆိုပြီး လွယ်လွယ်လေးနဲ့ အဖြေ မပေးပါနဲ့ ၊ ဒီထက် ပိုပြီး လေးလေးနက်နက် ပြန်တွေးကြည့်ရင်း အဖြေပေးပါ။ မင်းအနေနဲ့ အသက် 12 နှစ် အရွယ်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို အသေးစိတ်လေးတွေ က အစ မှတ်မိနေမယ် ဆိုတာ ငါသိပါတယ်။